प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा राखेपको भद्दा मजाक – Nepal's No. 1 Digital Newspaper
प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा राखेपको भद्दा मजाक
A veiw of an under-construction Mulpani Cricket Stadium in Kathmandu, on Tuesday, February 19, 2019. Photo: Shuvam Dhungana
By डिजिटल खबर Last updated May 26, 201920
१२ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कप एकदिवसीय क्रिकेट अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशविरुद्ध मुलपानी क्रिकेट मैदानमा पुग्दा नेपाल पुलिस क्लबका प्रशिक्षक मनोज कटुवाल जिल खाए ।
नखाउन पनि किन ? मुलपानीको तल्लो मैदानको अवस्था त्यस्तो थियो । पिचमा धमाधम म्याट ओछ्याउने काम भइरहेको थियो । आउट फिल्ड ध्वस्त थियो, बाउन्ड्री पनि व्यवस्थित थिएन । मैदान खेल्न योग्य नै थिएन भन्दा पनि हुन्छ तर राखेपले त्यही खेलाउने भयो ।
एकदिवसीय मान्यता पाएको देशका खेलाडीहरुले खेल्ने देशकै प्रतिष्ठित प्रतियोगिताको हालत देख्दा पूर्वखेलाडी समेत रहेका मनोजलाई १५ वर्ष पछाडि धकेलिएको महसुस भयो । ‘मेरो जमानामा मैले क्रिकेट खेलेको जस्तो लाग्छ’ उनले भने, ‘एकदिवसीय मान्यता पाएको देशका राष्ट्रिय खेलाडीहरुले म्याटमा क्रिकेट खेल्ने अवस्था आउनु दुःखद क्षण हो ।’
प्रधानमन्त्री कप नेपालको घरेलु क्रिकेटको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता हो भन्दा फरक पर्दैन । त्यसमाथि क्रिकेट संघ निलम्बनमा परेपछि यो राष्ट्रिय खेलाडीहरुले खेल्ने एक मात्र एकदिवसीय प्रतियोगिता हो । यसबाहेक तीन वटा फ्रेन्चाइज लिग हुन्छ तर, सबै २० ओभरको ।
त्यसैले घरेलु संरचना नभएको बेला हुन लागेको प्रधानमन्त्री कपलाई खेलाडीहरुले निकै महत्व दिएका थिए ।
तर, आयोजक राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र व्यवस्थापक नेपालय इन्टरनेशनलले यति ठूलो प्रतियोगितामा भद्दा मजाक गरेको छ । किनकी पिचमा म्याच बिछ्याएर १०/१५ वर्ष पहिले मात्र खेलिन्थ्यो, जतिबेला नेपाली क्रिकेट धेरै पछाडि थियो । टुँडिखेलमा मात्र यसरी खेलिन्थ्यो ।
नेपालले एकपछि अर्को सिढी चढ्दै एकदिवसीय मान्यता पाएको पनि एक वर्ष नाघिसक्यो । त्यस्तो अवस्थामा म्याटमा खेलाउँदा नेपाली क्रिकेट १५ वर्ष फर्किए जस्तो महसुस भएको पुलिसका प्रशिक्षक कटुवालले बताए ।
क्रिकेट मैदान नै नभएर म्याटमा खेलाउनु परेको पनि होइन । मुलपानीकै माथिल्लो मैदानमा कम्तिमा पिच राम्रो छ, आउट फिल्ड पनि कामचलाउ छ । त्रिवि क्रिकेट मैदान छ ।
अरु विकल्प हुँदाहुँदै राखेपले मुलपानीको तल्लो मैदानमै खेलाउने ढिपी कस्यो । तर, त्यसअनुसार न मैदान तयार पार्न सक्यो, न अरु तयारी नै गर्‍यो । त्यही कारण १० गते मुलपानीमा गर्ने भनिएको उद्घाटन समारोह हुन सकेन ।
अन्तिम समयमा कीर्तिपुरस्थित मैदानमा सारियो । १२ गतेसम्म पिच तयार पार्ने राखेप सदस्य सचिव केशव विष्टको दाबी पनि झुटो सावित भयो र, अन्ततः म्याटमा खेलाइएको छ ।
BusinessCricketDigital KhabarGameHealthInternationalMulpani Cricket StadiumNepal
हुवावेको संकट झनै बढ्यो, स्मार्टफोनमा मेमोरी कार्ड हाल्न नपाउने
एक दिवसीय क्रिकेटमा फिन्चको १७औं शतक
टोरिनोमाथि इन्टर मिलानकाे सानदार जित
भलिबल संघका उपाध्यक्ष सुवेदीद्वारा खेल सामग्री प्रदान
सुडानका पूर्व प्रधानमन्त्री मेहदीको कोभिड–१९ सङ्क्रमणपछि…
१८ थान एकनाले भरुवा बन्दुक बरामद
प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सको आईपीओ आउँदै
भारतीय विदेश सचिवले किन भेटेनन् प्रचण्डलाई ?
काठमाडौं महानगरपालिकाले कोरोना जोखिमको कारण अझै विद्यालय…
युनाइटेड इदी–मर्दीको आईपीओ आगामी तीन दिनभित्र बाँडफाँड
भोलीको बैठकमा नै नेकपाको छिनोफानो हुनसक्ने संकेत
१२ मंसिर २०७७, शुक्रबार १६:३०
१२ मंसिर २०७७, शुक्रबार १६:२५
१२ मंसिर २०७७, शुक्रबार १६:२१